Princess Cruises waxay goynaysaa Australia & New Zealand ilaa Janaayo 27, 2022
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Princess Cruises waxay goynaysaa Australia & New Zealand ilaa Janaayo 27, 2022
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • saaciday inay • Wararka Cusub ee New Zealand • News • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Warka xun wuxuu u sii socdaa warshadaha dalxiiska iyo rakaabka Australia ama New Zealand, ama kuwa la doonayo in lagu daro hoos -u -socodka socdaalka ayaa sii socda, ugu yaraan ilaa Janaayo 27. Waxay ka dhigan tahay inaan loo safrin oo laga imaan Australia iyo New Zealand ee Princess Doomaha iyo inta badan kuwa kale.
Gacan-goyska Princess wuxuu sii dheereynayaa joogitaankiisa fasaxyada dalxiiska ee Australia/New Zealand ilaa Janaayo 27, 2022,
Tani waxay sabab u tahay hubin la'aanta ku soo noqoshada doonyaha ee gobolka.
Sababtoo ah kordhinta hakinta, safarada Coral Princess ilaa Janaayo 17 waa la joojiyay iyo xilliyadii Princess Princess iyo Sapphire Princess ilaa Maarso 2022 waa la joojiyay.
Deanna Austin, oo ah Sarkaalka Ganacsiga ee Princess Cruises ayaa tiri "Waxay u muuqatay inaanan awood u yeelan doonin inaan gaarsiinno qorshaynta Royal Princess iyo Sapphire Princess ee Australia ka hor inta aysan bilaabin socdaalkooda waqooyiga hemisphere ee la daabacay." "Waxaan aqoonsannahay in martida qorshaynaysa safarrada xagaaga caanka ah iyo xilliga fasaxa sannadka cusub ay si gaar ah uga niyad jabi doonaan isbeddellada, si kastaba ha ahaatee, waxaan doonaynay inaan martida siino ogeysiis intii suurtogal ah si ay u qorsheeyaan fasaxyadooda si hubaal ah."
Martida ku ballansan socdaalka la baajiyay, martidu waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay u guuraan safar u dhigma. Dib -u -habaynta dib -u -habeynta waxay yeelan doontaa faa'iidooyin dheeri ah oo lagu ilaalinayo qiimaha martida markabkooda beddelka ah. Haddii kale, martidu waxay dooran karaan amaahda socdaalka ee mustaqbalka (FCC) oo u dhiganta 100% qiimaha safarka oo lagu daray gunno dheeraad ah oo aan la soo celin karin FCC oo la mid ah 10% qiimaha safarka markabka (ugu yaraan $ 25 USD) ama dib u soo celin buuxda qaabka lacag bixinta.
Macluumaadka ugu badan iyo tilmaamaha loogu talagalay martida ballansan ee ay saameeyeen joojintan, iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan FCCs iyo soo celinta, waxaa laga heli karaa internetka Macluumaadka Safarrada Saameynta & Joojinta.